२५ लागे नेयमारः रोनाल्डो भन्दा ११८ गोल अगाडि, मेस्सी भन्दा एक » खबरहरुको एउटै केन्द्र
२५ लागे नेयमारः रोनाल्डो भन्दा ११८ गोल अगाडि, मेस्सी भन्दा एक
सोमबार, माघ २४, २०७३ ०५:२१ मा प्रकाशित !
काठमाडौं । ब्राजिलियन स्ट्राइकर नेयमारले आइतबार २५ औं जन्मदिन मनाएका छन् । यही बेला मेस्सी र रोनाल्डोले त्यही उमेरमा पाएको सफलतासँग तुलाना रोचक नै हुन्छ । जसमा नेयमार धेरै अगाडि देखिएका छन् । बार्सिलोनाबाट व्यवसासिक फुटबल खेलिरहेका उनको करियर लोभलाग्दो छ । उनले अहिले नै च्याम्पियन्स लिगका साथै दुई ला लिगा, दुई कोपा डेल रेका साथै ओलम्पिक गोल्ड मेडल जितिसकेका छन् । अब उनले जित्न बाँकी भनेको विश्वकप र बालोन डि’ओर मात्र हो । र, उनले बालोन डि’ओरमा रोनाल्डो र मेस्सीलाई चुनौती दिन थालिसकेका छन् ।
२५ वर्षको उमेरमा मेस्सीले तीन च्याम्पियन्स लिग, पाँच ला लिगा जितेका उनले तीन बालोन डि’ओर हात पारिसकेका थिए । रोनाल्डोले तीन पि्रमियर लिगको उपाधिसँगै एक बालोन डि’ओर अवार्ड जितेका थिए । बालोन डि’ओरमा पछि परेपनि मैदानमा भने नेयमार, मेस्सी र रोनाल्डो भन्दा अगाडि रहे ।
ब्राजिलियन क्लब सान्तोषका पूर्व खेलाडी नेयमारले २५ वर्षको उमेरमा मेस्सी भन्दा एक र रोनाल्डो भन्दा ११८ गोल बढी गरेका छन् । नेयमारले क्लब र देशका लागि गरेर ४६८ खेलमा २८० गोल गरेका छन् । जबकी २५ वर्षको उमेरमा मेस्सीले ४०५ खेलमा २७९ गोल गरेका थिए ।
PREVIOUS POST Previous post: कक्षा ११ को मौका परीक्षामा ४६ हजार उतीर्ण-
NEXT POST Next post: जेठ १ र १९ गते स्थानीय चुनाव –
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते सोमबार, माघ २४, २०७३ ०५:२१
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस सोमबार, माघ २४, २०७३ ०५:२१
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण सोमबार, माघ २४, २०७३ ०५:२१
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी सोमबार, माघ २४, २०७३ ०५:२१
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? सोमबार, माघ २४, २०७३ ०५:२१